Harena an-kibon’ny tany : marefo loatra ny lalàna hatramin’izay | NewsMada
Harena an-kibon’ny tany : marefo loatra ny lalàna hatramin’izay
Vita, omaly, ny fifamindram-pahefana tao amin’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika. Ny lalàna hatramin’izay ny fototry ny olana amin’ity sehatra ity, raha ny famintinana nataon’ny minisitra teo aloha, i Zafilahy Ying Vah, nampitainy amin’ny minisitra vaovao Rabary Njaka Henri.
« Manankarena amin’ny harena an-kibon’ny tany i Mdagasikara, nefa mampalahelo fa kely ny anjara entin’izany amin’ny harinkarena faobe», hoy ny minisitra Zafilahy Ying Vah nandritra ny famindram-pehafana teo aminy sy ny minisitra vaovao, Rabary Njaka Henri. Nanazava ny minisitra teo aloha fa noho ny lalàna momba ny harena an-kibon’ny tany marefo loatra hatrany amin’ny Repoblika voalohany, nitohy tamin’ny Repoblika faharoa sy fahatelo izany, tsy natao hitondra tombontsoa ho an’ny firenena. Ny taona 80, ohatra, ny fampiasam-bola 200 tapitrisa Ar efa nosokajina ho fitrandrahana lehibe, nefa natao nitovy amin’ny fampiasam-bola amin’ny faritra afakaba.
Tonga ny taona 1999, napetraka ny lalàna mahakasika ny fitrandrahana vaventy (LGM). Be loatra ny velaran-tany nomena ireo mpitrandraka, malalaka ihany koa ny fanomezana fahazoan-dalana, tsy misy fepetra mazava takina aminy, ilay hoe “izay tonga voalohany, omena voalohany” ; tsy misy koa ny fanerena ireo mpitrandraka hamerina eto an-toerana ny vola vahiny azony amin‘ny varotra nataony. Gaboraraka ny fitrandrahana ny harena an-kibon’ny tany noho izany rehetra izany.
Mbola tsy tratra ny tanjona…
Nasiam-panovana ny rafitra sy ny lalàna rehefa natokana ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika. Manana betsaka amin’ny vatosoa sy volamena isika, koa nezahina ny fampanarahan-dalàna, ny fanaovana tatitra, sns. “Raha tamin’ny taona 2008, ohatra, tsy nisy afa-tsy 50 kg ny volamena nanaovana tatitra ara-dalàna amin’ny fanjakana; tafakatra 2.833 kg izany ny taona 2017. Na izany aza, mbola tsy tratra ny tanjona… Noho ny fiarahana sy ny fifampitokisana amin’ireo mpiara-miasa rehetra izany”, hoy ny namindra fahefana, i Zafilahy Ying Vah.
Nivantana avy hatrany amin’ny rehetra ao amin’ny minisitera kosa ny minisitra vaovao Rabary Njaka Henri. Tanjona napetrany ny mba hitondra harena marina ho an’ny vahoaka ity sehatra ity, koa mangataka ny hifanome tanana sy ny hifanoro hevitra amin’ireo manana traikefa ny tompon’andraikitra vaovao.